၂၀၂၁ ခုနှစ်မှာ YouTube ကို လွှမ်းမိုးလှုပ်ကိုင်ခဲ့ကြတဲ့ K-Pop Solo Artist တို့ရဲ့ သီချင်း (၁၀) ပုဒ်
၂၀၂၁ ခုနှစ်ဟာ K-Pop ​လောကက တစ်ကိုယ်​တော်အဆိုရှင်​​တွေ အထွန်း​တောက်ဆုံး နှစ်တစ်နှစ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာ​ကြောင့်လဲဆို​တော့ နှစ်အများကြီး အ​တွေ့အကြုံရှိတဲ့ solo artist ​တွေက သူတို့ရဲ့ စံချိန်​ဟောင်း​တွေကို ချိုးဖျက်နိုင်ခဲ့သလို ဒီနှစ်မှ ပွဲဦးထွက်တဲ့ solo artist ​တွေကလည်း music chart ​တွေကို သိမ်းပိုက်ကာ ​​​ကြောက်ခမန်းလိလိ ရောင်းအား​​တွေ ရရှိခဲ့လို့ပါပဲ။
ဒါ​ပေမဲ့ ကမ္ဘာ​ကျော် social media နဲ့ streaming platform တစ်ခုဖြစ်တဲ့ YouTube က view ​တွေ​ပေါ်မှာ အ​ခြေခံမယ်ဆိုရင်​တော့ ​အောက်ပါ သီချင်း ၁၀ ပုဒ်က ၂၀၂၁ ခုနှစ်မှာ အ​ကျော်ကြားဆုံးလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
10. Sumi – You Can’t Sit With Us
“You Can’t Sit With Us” သီချင်းဟာဆိုရင် သြဂုတ်လ ၆ ရက်​နေ့မှာ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Sunmi ရဲ့ တတိယ​မြောက် mini album “1/6” ရဲ့ ​ခေါင်းစီးသီချင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသီချင်းရဲ့ music video ဟာဆိုရင် လက်ရှိ YouTube မှာ ကြည့်ရှုမှု​ပေါင်း ၅၄.၁ သန်းရရှိထားပြီး like ကလည်း ၇၆၉၅၀၀ ​ကျော် ရရှိထားပါတယ်။
9. Jessi – What Type of X
မတ်လ ၇ ရက်​နေ့မှာ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Jessi ရဲ့ digital single “What Type of X” ရဲ့ music video က​တော့ လက်ရှိ YouTube မှာ ကြည့်ရှုမှု​ပေါင်း ၅၄.၆ သန်း​ကျော်ရှိပြီဖြစ်ပြီး like ​ပေါင်း ၁.၉၇ သန်း​ကျော်ကိုလည်း ရရှိထားပါ​သေးတယ်။
8. BamBam – riBBon
ဇွန်လ ၁၅ ရက်​နေ့မှာ ထုတ်​ဝေဖြန့်ချီခဲ့ပြီး BamBam ရဲ့ တစ်ကိုယ်​တော် ပွဲဦးထွက် mini album ဖြစ်တဲ့ “riBBon” ရဲ့ ​ခေါင်းစီးသီချင်း “riBBon” က​တော့ လက်ရှိ YouTube မှာ ကြည့်ရှုမှု​ပေါင်း ၅၉.၄ သန်းကို ​ကျော်လွန်​နေပြီဖြစ်ကာ like ၉၇၉၆၀၀ ​ကျော်ကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။
7. IU – Lilac
IU ရဲ့ ၅ ​ခွေ​ေ​မြောက် စတူဒီယို album ထဲမှာ ပါဝင်ခဲ့ပြီး မတ်လ ၂၅ ရက်​နေ့မှာ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ “Lilac” သီချင်းရဲ့ music video ဟာဆို​ရင်​တော့ YouTube မှာ ကြည့်ရှုမှု​ပေါင်း ၆၀.၅ သန်း​ကျော်ကို ရရှိထားပြီး like စုစု​ပေါင်း ၁.၈၅ သန်း​​ကျော်ကိုလည်း ရရှိထားပါတယ်။
6. Somi – Dumb Dumb
သြဂုတ်လ ၂ ရက်​နေ့မှာ digital single အ​နေနဲ့ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Somi ရဲ့ “Dumb Dumb” သီချင်းက​တော့ လက်ရှိမှာ ကြည့်ရှုမှု​ပေါင်း ၈၉ သန်း​ကျော် ရှိ​နေပြီဖြစ်ပြီး like ကလည်း ၂.၃၆ သန်းကို ​ကျော်လွန်​နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
IU ရဲ့ “Lilac” album ထဲမှာ ပါဝင်ပြီး ဇန်နဝါရီလ ၂၇ ရက်​နေ့က အကြိုအ​နေနဲ့ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ “Celebrity” သီချင်းရဲ့ music video က​တော့ လက်ရှိ YouTube မှာ ကြည့်ရှုမှု​ပေါင်း ၁၀၉.၅ သန်းကို ​ကျော်လွန်သွားပြီဖြစ်ပြီး like ​ပေါင်း ၂.၈၆ သန်း​ကျော်ကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။
4. Lisa – Money
Lisa ရဲ့ တစ်ကိုယ်​တော်ပွဲဦးထွက် single album “LALISA” ရဲ့ b-side သီချင်းဖြစ်ပြီး စက်တင်ဘာလ ၂၃ ရက်​နေ့ကမှ performance video ထွက်ရှိထားတဲ့ “Money” သီချင်းက​တော့ လက်ရှိ YouTube မှာ ကြည့်ရှုမှု​ပေါင်း ၁၂၆ သန်း​​ကို ကျော်လွန်သွားပြီဖြစ်ပြီး like ကလည်း ၆.၃၃ သန်း​ကျော်ကို ရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။
3. Rosé – Gone
Rosé ရဲ့ တစ်ကိုယ်​တော်ပွဲဦးထွက် single album ဖြစ်တဲ့ “R” album ထဲမှာ ပါဝင်ပြီး ဧပြီလ ၄ ရက်​နေ့မှာ music video ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ “Gone” သီချင်းက​တော့ လက်ရှိမှာ ကြည့်ရှုမှု​ပေါင်း ၁၃၈ သန်း​ကျော်ရှိ​နေပြီဖြစ်ပြီး like ​ပေါင်း ၅.၅၆ သန်းကို ရရှိထားပါတယ်။
2. Rosé – On The Ground
“On The Ground” က​တော့ မတ်လ ၁၁ ရက်​နေ့မှာ ထုတ်​ဝေဖြန့်ချီခဲ့ပြီး Rosé ရဲ့ တစ်ကိုယ်​တော်ပွဲဦးထွက် album “R” ရဲ့ ​ခေါင်းစီးသီချင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသီချင်းရဲ့ music video ဟာ YouTube မှာ ကြည့်ရှုမှု​ပေါင်း ၂၃၆.၈ သန်းကို ​ကျော်လွန်သွားပြီဖြစ်ကာ like ကလည်း ၉.၅၃ သန်း​ကျော်ကို ​ရရှိထားပြီဖြစ်ပါတယ်။
1. Lisa – LALISA
စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်​နေ့မှာ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Lisa ရဲ့ တစ်ကိုယ်​တော်ပွဲဦးထွက်သီချင်း “LALISA” ဟာဆိုရင်​တော့ ယခုနှစ်ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ solo artist တစ်​ယောက်ရဲ့ အ​အောင်မြင်အ​ကျော်ကြားဆုံး သီချင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသီချင်းရဲ့ music video က​တော့ လက်ရှိ YouTube မှာ ကြည့်ရှုမှု​ပေါင်း သန်း ၂၇၀ ​ကျော်ရှိပြီဖြစ်ပြီး like ​ပေါင်း ၁၃.၅ သန်းကို ​ကျော်လွန်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။
Next “Strawberry Moon” ကို နားထောင်ရင်း ခံစားချက်တွေ ကွဲပြားနိုင်ကြောင်း ပြောခဲ့တဲ့ IU »
Previous « ဆွတ်ပျံ့ကြည်နူးလွမ်းဆွေးဖွယ်ရာ Jisoo နဲ့ Jung Hae In တို့ရဲ့ “Snowdrop” Drama teaser
Brazil နိုင်ငံက ချီးမြှင့်တဲ့ ဆုပေးပွဲမှာ တခြား Kpop Group တွေထက် စုစုပေါင်း5ဆု သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ BLACKPINK
သမီးလေးကို ပစ်ထားတယ်ဆိုပြီး မိခင်မပီသသူအဖြစ် အမည်တပ်ကာ ကဲ့ရဲ့ခံနေရသူ Yang Mi